बुटवलस्थित कोरोना विशेष अस्पतालमा उपचाररत २ जना कोरोना संक्रमितको मंगलवार मृत्यु भएको छ ।
रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका–११ की ५० वर्षीया महिलाको सोमवार राति ८ः१७ बजे र बुटवल उपमहानगरपालिका–१३ का ५२ वर्षीय पुरुषको मंगलवार बिहान करीब ६ बजे निधन भएको हो ।
महिलामा उच्च ज्वरो र श्वासप्रश्वासमा समस्या देखिएपछि उपचारका क्रममा मृत्यु भएको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका सूचना अधिकारी डा. विष्णु गौतमले मंगलवार जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । उनलाई सोमवार कोरोना संक्रमण पुष्टि भएर अस्पताल भर्ना गरिएको थियो ।
बुटवलका पुरुष कात्तिक ७ गते रिपोर्ट पोजेटिभ आएपछि त्यही दिन अस्पताल भर्ना भएका थिए । उनको पनि उच्च ज्वरो र श्वासप्रश्वासमा समस्या भएको र उपचारका क्रममा मृत्यु भएको डा. गौतमले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।